ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အွန်လိုင်းမှာချိန်းတွေ့, Conversation ဆွေးနွေးတိုင်ပင် 100% အောင်မြင်ခြင်း
လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဖို့မသက်ဆိုင်ဘဲမူလသူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်အပြောင်းကာလ၏များစွာသောအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးကိုမြင်ခဲ့ပြီဟု. တစ်ဦး၏အဆိုအရ ဇူလိုင်လအတွက်ကောက်ယူသုတေသနလုပ်ငန်း, 2014, တိုင်းပြည်ယခုရှိပါတယ် 41,250,000 သူတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာ၌တစ်ချိန်ချိန်တွင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ကြိုးစားခဲ့ကြသူလူ.
အမေရိကန်ကလက်ရှိလူဦးရေ၏သည်ထည့်သွင်းစဉ်းစား 361.1 သန်း, အွန်လိုင်းကနေချိန်းတွေ့၏အယူအဆထက်ပို woo မှစီမံခန့်ခွဲသူကပြောပါတယ်နိုင်ပါသည် 11% တိုင်းပြည်အတွင်းကလူ. ဒါကြောင့်, ဤသူတို့သည်အဘယ်သို့ပြုပါ 11% သူတို့ကသူတို့၏ Online အလားအလာအိမ်ထောင်ဖက်ကိုခရီးဦးကြိုသည့်အခါလူအကြောင်းပြောဆို?
လူများကအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ site ပေါ်တွင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားခရီးဦးကြိုပြုခြင်းရှေ့တော်၌ထိုစကားပြောဆိုမှုကတကယ်တော့အများကြီးကစတင်ခဲ့သည်. ညာဘက်မိတ်ဖက်ဆိုတော့သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်ဖို့, သင်တစ်ဦးသည်စုံလင်သောပရိုဖိုင်ကိုရှိရမည်, ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အပြောသော Profile တစ်ခု. ဒါဟာလူသတ်သမားခေါင်းစဉ်ကိုသယ်ပေးသင့်, သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဓါတ်ပုံနှင့်သင်လူအမှန်တကယ်သင်တို့နှင့်အတူစကားလက်ဆုံစိတ်ဝင်စားကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်မီကိုသိလိုတချို့သတင်းအချက်အလက်. သင်ကပြီးပြည့်စုံသောပရိုဖိုင်းရှိပါက, အွန်လိုင်းမှပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတွေ့ဆုံရန်ရန်သင်၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုအများကြီးပိုမြင့်လိမ့်မည်.
ယခုတွင်သင်သည်မေးခွန်းကိုစကားပြော Admiral ရပြီအကောင်းဆုံးအကြောင်းအရာအပေါ်စကားပြောဆိုဖို့အဘယ်သို့သောအ. ဒီနေရာမှာအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့စကားပြောဆိုသည့်အကြောင်းအရာများအပေါ်အနည်းငယ်အကြံပြုချက်.
ချီးမွမ်းမကြိုက်ဘူးသောသူအနည်းငယ်ရှိပါတယ်. ဒါကြောင့်, သင်ကအခြားလူတစ်ဦး complimenting ခြင်းအားဖြင့်စကားပြောဆိုစတင်နိုင်ပါသည်. အဆိုပါစံပြလမ်းသူ / သူမ၏ဖြင့်ရွေးချယ်မှုများအစဉ်ချီးမွမ်းဖြင့်စတင်ရန်ဖြစ်သည်. ဥပမာအားဖြင့်, သင်တို့သည်အစာ၏လူတစ်ဦးရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခြီးမှမျးနိုငျ, ဂီတ၏အရသာ, စသည်တို့ကို. ဒီနည်းနဲ့သင့်ရဲ့အလားအလာမိတ်ဖက်သင်အမှန်တကယ်သူ / သူမ၏ profile မှတဆင့်ဖတ်ရှုဖို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေအများကြီးအတွက်သွင်းထားပြီဖြစ်ကြောင်းနာ​​းလည်စေတော်မူမည်.
တစ်ဦးတစ်ဦးချင်းစီ၏အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ပရိုဖိုင်းကိုဖတ်ရှုခြင်းကိုလည်းသူ / သူမအတွက်စိတ်ဝင်စားသည်သင်တို့ဘာသာရပ်များအကြောင်းကိုသိခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်. သူတို့ထံမှ, သင်တို့ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားသောဘာသာရပ်များကောက်နှင့်စကားပြောဆိုရှေ့ဆက်လှုံ့ဆော်ပေးအဖြစ်, သူတို့အပေါ်မှာဆွေးနွေးမှုတွေစတင်. ဒီနှစ်ဖက်စလုံးအတွက်အ chat မှပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်စေမည်. သင်ကအထူးသဖြင့်သူနှင့်အတူမည်သည့်အကျိုးစီးပွားများကိုမျှဝေမထားဘူးဆိုရင်, သူ / သူမဖြစ်ကောင်းသည့်ရက်စွဲမှညာဘက်ကိုလူတစ်ဦးမဟုတ်ပါ.
သင်ကသူနှင့်အတူ chatting လုပ်နေကြတယ်သက်သာခံစားစတင်အဖြစ်, သင်အသက်တာအကြောင်းကိုဆြေးြေိံးစတင်နိုင်ပါသည်. ဘဝတွင်သင်ပြုမိပါပြီအရာအပေါ်စကားပြောဆိုချက်တွေကိုရှိနိုင်ပါသည်, အသက်တာ၌သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေ, သင်ခဲ့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝမျိုးကို, နောက် ... ပြီးတော့. တဖြည်းဖြည်းနဲ့အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်သူ / သူမ၏အသက်တာ၏ပုံပြင်များဝေမျှပေးခြင်းဖြင့်တုံ့ပြန်စတင်သည်အဖြစ်, သင်စကားပြောဖို့ chat ပို. ပို. စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောဖြစ်လာတွေ့လိမ့်မည်. အကောင်းဆုံးကတော့, သင်ရှိသည်ပထမဦးဆုံးကို chat စဉ်အတွင်းအတိတ်ဆက်ဆံရေးကိုအကြောင်းပြောနေတာဖွင့်မထားသင့်; သင်၏နှစ်ဦးကိုကောင်းစွာအချင်းချင်းနာ​​းလည်သဘောပေါက်စတင်တစ်ချိန်ကထိုကဲ့သို့သောသည့်အကြောင်းအရာများဆွေးနွေးကြသင့်ကြောင်း.
အွန်လိုင်း daters မ​​ျား၏အများစုကိုသူတို့ကိုရယ်မောစေနိုင်တဲ့သူတွေကိုတွေ့ဆုံကိုချစ်; သူတို့သည်ဤပိုင်လိင်စစ်မှန်သောမသက်ဆိုင်ဘဲမူလအတိုကောက်. ဒါကြောင့်, အနည်းငယ်သတ္တိ-one သဘောထားပြင်းထန်နဲ့ပြက်လုံးတွေပြက် sharing စကားပြောခန်းကိုပိုမိုစုပ်ယူရာတွင်များစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. သင့်ရဲ့ဟာသနှင့်အတူ cheesy ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားဘယ်တော့မှမ, နှင့်စသင်နှင့်အတူစကားပြောဖြစ်ကြောင်းလူတစ်ဦး၏ပျော်စရာအောင်ကိုရှောင်ကြဉ်.
အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့စကားပြောဆိုသည့်အကြောင်းအရာများအရသာပေါ်တွင် မူတည်. ကွဲပြားလေ့, ပညာရေးနောက်ခံနှင့်လူမျိုး၏အသက်. ဒါကြောင့်, အွန်လိုင်းမှရက်စွဲစဉ်အတွင်းစကားပြောဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်တဲ့အခါစိတ်ထဲတွင်ဤအချက်များကစောင့်ရှောက်ရမယ်.